Ungakunaka Kanjani Ukuthunywa Kwakho Kwesikhathi Esizayo? | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Uyakwazi yini ukwethula isimo esivezwa uNkulunkulu enkathini ngayinye ngendlela ephathekayo, ngolimi olubonakalisa ngokufanele ukubaluleka kwenkathi? Uyakwazi yini, wena ozwa umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina, ukusichaza ngemininingwane isimo sikaNkulunkulu? Ungafakaza yini ngesimo sikaNkulunkulu ngokucacile nangokunembayo? Ungakwedlulisela kanjani okubonile kanye nodlule kukho, kulabo abadabukisayo, abampofu, namakholwa azinikele, alambele futhi omele ukulunga futhi abalindele wena ukuba ubeluse? Hlobo luni lwabantu abalindele wena ukuba ubeluse? Ungabona ngamehlo engqondo? Ngabe uyawazi umthwalo owuthwele, ukuthunywa kwakho, kanye nesibopho sakho? Lukuphi ulwazi lomlando wokuthunywa? Ungasebenza kanjani njengomphathi omuhle enkathini ezayo? Ngabe unawo umqondo ophakeme wokuba ngumphathi? Ungamchaza kanjani umphathi wazo zonke izinto? Ngabe ungumphathi wazo zonke izidalwa eziphilayo kanye nazo zonke izinto ezisezweni ngempela? Yiziphi izinhlelo onazo zokuthuthuka kwesinyathelo esilandelayo somsebenzi? Bangaki abantu abalinde wena ukuba ube umelusi wabo? Ngabe umthwalo wakho ungosindayo? Bampofu, bayadabukisa, bayizimpuphuthe, futhi balahlekile, bayalila ebumnyameni, “Iphi indlela?” Yeka indlela abalangazelela ukukhanya ngayo, njengenkanyezi etshuzayo, eyehla masinyane bese ihlakaza amandla obumnyama obucindezele abantu iminyaka eminingi. Ubani ongazi ukuthi bethemba ngokukhathazeka okungakanani, futhi bakulangazelela kangakanani lokhu ubusuku nemini? Laba bantu abahlupheka kakhulu bahlala beboshwe emigodini yobumnyama, bengenalo ithemba lokukhululwa, ngisho nangosuku lokubanika kokukhanya; bayoyeka nini ukukhala? Le mimoya entekenteke engazange ithole ukuphumula ihlupheka ngempela ngeshwa elingaka. Bavalelwe isikhathi eside unya lwezintambo kanye nomlando omi ndawonye. Ubani oke wezwa umsindo wokukhala kwabo? Ubani oke wabona isimo sobuso babo obudabukisayo? Ngabe uke wacabanga ukuthi inhliziyo kaNkulunkulu ilusizi futhi ikhathazeke kangakanani? Angakumela kanjani ukubona abantu abangenacala abadala Yena ngezandla Zakhe behlupheka? Vele, isintu sineshwa lokufakelwa ubuthi. Nakuba siphile kwaze kwaba yinamuhla, ubani obengase acabange ukuthi sekunesikhathi eside sifakelwe ubuthi ngomubi? Ingabe usukhohliwe ukuthi nawe ungomunye walabo bagilwa? Ngothando othanda ngalo uNkulunkulu, awufuni yini ukuzama ukusindisa labo abaphilayo? Awufuni yini ukufaka wonke amandla akho ekukhokheleni uNkulunkulu othanda isintu njengenyama kanye negazi Lakhe siqu? Ungakuhumusha kanjani ukusetshenziswa nguNkulunkulu ukuze uphile ukuphila okuhlukile kokwabanye? Ingabe unalo ngempela ugqozi kanye nokuzimisela ukuphila impilo enenhloso, yomuntu ongcwele okhonza uNkulunkulu?
Okwedlule: Iqiniso Langaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba (4)
Okulandelayo: Kuyini Ukuqonda Kwakho Izibusiso?
Umsebenzi wezinsuku zokugcina ukwahlukanisa bonke ngokohlobo lwabo, ukuze kuphothulwe uhlelo lukaNkulunkulu lokuphatha, ngoba isikhathi...